KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Wasaarada Warfaafinta: Idaacadaha ruqsad la’aan ma ka shaqayn doonaan Dalka
Sunday 9 December 2012 22:00
Wasaarada Warfaafinta: Idaacadaha ruqsad la’aan ma ka shaqayn doonaan Dalka
Muqdisho (KON) - Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Ciil-mooge Xirsi ayaa sheegay inaanay jiri doonin hada kadib Idaacad Ruqsad la’aan ku shaaqaysa Dalka.
Hadalka Wasiirka ayaa imaanaya xilli ay idaacadaha Muqdisho ka howlgala ay sii kordhayaan.
Wasiiska oo maanta ka hadlayay xaflad ay wasaaradda qalab warbaahineed kala wareegeysay xafiiska siyaasadda u qaabilsan Qaramada Midoobay (UNPOS) oo Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegay inay diyaariyeen shuruucda warbaahinta, dhowaanna ay soo bandhigi doonaan.
Wasiirka ayaa Warbaahinta Soomaaliyeed ugu baaqay iney dhowraan Shruucda Saxaafadda.
Keydmedia Online - Xafiiska Muqdihso